कास्कूनद्वारा नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल तथा सुझाव संकलन | Sahakari Nepal
कास्कूनद्वारा नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल तथा सुझाव संकलन
काठमाडाैं । कास्कूनले आफ्नो ४ वर्षे नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी त्यस माथि सहकारी अभियन्ता तथा सरोकारबालाहरूसँग छलफल तथा सुझाव संकलन गरेको छ । यस विषयमा कास्कुनले शुक्रबार एक कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कून, जिल्ला सहकारी संघ, कास्कूनका पूर्व पदाधिकारी लगायत सल्लाहकार तथा सदस्यहरूमाझ छलफल गराएको थियो ।
योजना अवधिमा कास्कूनले सदस्य सन्तुष्टी ८५% पुर्यांउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसै गरी भाखा नागेको ऋणलाई २ प्रतिशत भन्दा कम गर्ने, ७५ % सदस्यलाई क्रियाशिल बनाउने, सदस्य नविकरणलाई ९०% पुर्यावउने, ५०% भन्दा बढि सदस्यलाई संघसँग नियमित कारोवार गराउने र संघको केन्द्रियता सूचकांक ३०% भन्दा माथि पुर्यााउने लक्ष्य संघले तय गरेको छ । लक्ष्यमा पुग्न सम्पूर्ण अभियानलाई साथ लिएर अघि बढ्न आफ्नो टिम तयार रहेको कास्कूनका अध्यक्ष दीपक पनेरूले बताए । कास्कूनका कोषाध्यक्ष निरन्जन सेडाईँले सदस्यको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कास्कूनले काठमाडौँको समग्र अभियानलाई नै सकारात्म दिशा तर्फ लैजाने गरी काम गर्ने विचार व्यक्त गर्दै सहभागीहरूलाई धन्यबाद ज्ञापन गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफलका क्रममा कास्कूनका सदस्य संस्थाका प्रतिनिधीहरूले सदस्यता बृद्धि लक्ष्य कम भएको, सदस्यता नविकरणको व्यवस्था राखिनु उचित नभएको, संघमा अनिवार्य आबद्धताको व्यवस्था गरिनुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रमलाई थप व्यवसायमुखी बनाइनुपर्ने, आवधिक योजना तर्जुमा गरि अगाडि बढ्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी अतिथिहरूले कास्कूनको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा सुझाव दिनुका साथै सहकारीका समसामयिक विषयहरू र अहिलेको सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा समेत आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
के-के भने अभियन्ताहरूले ?
पूर्वअध्यक्ष/ सल्लाहकार, कास्कून﻿
कास्कूनले सदस्यको हितका लागि बहस र पैरवीमा जोड दिनुपर्छ । कास्कूनले अघिल्लो कार्यकाल देखि नै ब्रान्डिङ र स्तरीकरणलाई महत्व दिएको छ यसले निरन्तरता पाउनु राम्रो पक्ष हो । संघलाई अझ सुदृढ बनाएर लैजानु पर्छ । नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुरूप नै उपलब्धि हासिल हुनेमा विश्वस्त छु ।
सदस्यता विस्तार गरेरे जिल्लाका सबै बचत ऋण संस्थालाई आबद्ध गराइनु पर्छ तर सदस्य संस्थाहरूलाई एकीकरणमा जान प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । सदस्यलाई शेयर बेचेको संस्थामा नविकरणको व्यवस्था गरिनु हुँदैन । हाल लागु गरिएको सन्दर्भ ब्याजदरको प्रक्रिया गलत भयो । कार्यविधि तयार गरेर सो अनुरूप सन्दर्भ ब्याजदर तोकिनुपर्थ्यो । अहिले तोकिएको दर सबै ठाउँका लागि व्यवहारिक छैन, यसलाई सच्याउनु पर्छ ।
संयोजक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, नेफ्सकून
काठमाडौँ भित्रको सहकारी अभियान सुशाषनमा कमजोर भएकोले विषयगत जिल्ला संघहरू, सहकारी बैंक, केन्द्रीय संघहरू र महासंघले संयूक्त कार्यक्रम बनाएर संचालन गर्नुपर्छ । स्वनियमन कमजोर भएमा अभियान कमजोर हुन्छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बैंक भन्दा धेरै माथिल्लो नैतिक मूल्य बोकेका संस्था हुन् । सहकारीले ऋण खान सिकाउने नभई बचत गर्न र पूँजी निर्माण गर्न सिकाउँछन् । अहिले तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदरका सवालमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । चर्को व्याजलाई सहकारीले प्रोत्साहन गर्दैन तर ब्याजदर निर्धारण अन्यत्र बाट तोकिनु सहकारी सिद्दान्त विपरित छ ।
काठमाडौँले दिएको सन्देश नै देशभर जाने भएकोले कास्कूनले अनुकरणीय काम गर्नुपर्छ । नेफ्स्कूनले जिल्ला बचत संघहरूसँग सहकार्य गर्ने विषयमा पछिल्लो समय अग्रसरता देखाएको छ र त्यसै गरी कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारिएको छ । केन्द्रद्वारा जिल्लासँग साझेदारी कार्यक्रमहरू लागु गरिएको छ । यसले आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका संघहरूलाई पनि तत्कालका लागि केहि बलियो बनाउने र जिल्ला बचत संघलाई व्यवसायिकता तर्फ जान मद्दत गर्नेछ ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेफ्स्कून
बचत तथा ऋण सहकारीको स्वामित्व, नियन्त्रण र प्राप्त हुने लाभ सदस्यको हुन्छ भन्ने सिद्दान्त अकाट्य छ । सहकारीलाई प्रभावित गर्ने कानून र नीति तयार गर्दा यस भन्दा बाहिर गएर गरिनु हुँदैन । सन्दर्भ ब्याजदर शाब्दिक रूपमै सूचना स्रोत मात्र हो यसलाई आधार दरका रूपमा लागु गरिनु हुन्न ।
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.
सबै सहकारीहरूले सहकारीको पैसा सहकारी भन्दा बाहिर जान नदिने गरि काम गर्नु पर्छ । जिल्ला भित्रको अभियान र बैंक समन्वय गरेर कार्यक्रम लागु गर्नु पर्छ । सन्दर्भ ब्याजदरले शहरी क्षेत्रका सहकारीहरूलाई अप्ठेरो पार्छ त्यसैले यो पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ ।
संयोजक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
कास्कूनको रणनीतिक योजना अलि बढि महत्वाकांक्षी लाग्यो । योजना कार्यान्वयनको पक्षले महत्व राख्छ । कार्यक्रमलाई कार्यतालिकामा ढालेर तोकिएको समयमा कार्यसम्पन्न गर्दै जानुपर्छ । सहकारी अभियान भित्र बाध्य पार्ने र बाध्य भएर काम गर्ने अवस्था ल्याईनु हुँदैन, प्रजातान्त्रिक आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
काठमाडौँको अभियानमा एकीकरण अपरिहार्य छ । संस्थाहरूलाई प्रणाली भित्र ल्याई सञ्चालन गरिनुपर्छ । सुशाषनको अभ्यासमा जोड दिनुपर्छ । सम्पूर्ण अभियानले यसका लागि प्रयास गर्न जरूरी छ । सन्दर्भ ब्याजदरका सवालमा यो दर अलि माथि हुनुपर्ने हो कि भन्ने नलागेको होईन तर जति पनि स्याम्पलिङ गरिएको त्यसका आधारमा यो भन्दा मूनि कै दर आएकोले गर्दा हामी १६ प्रतिशतमा सहमत हुन बाध्य भयौँ ।
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपाल
कास्कूनका कार्यक्रम र योजनाहरू राम्रा छन् । यसमा सबैले सक्रिया भूमिका निर्वाह गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सहकारीको जन्म नै चर्को ब्याज बिरूद्ध, विभेद, अन्याय र अत्याचारका विरूद्ध भएको हो । सहकारीले चर्को ब्याजको पक्ष लिनु हुँदैन । संस्था बलियो बनाउने भन्दा सदस्य बलियो बनाउने काम गर्नुपर्छ । हाल तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर फिर्ता हुँदैन र तत्काल संशोधन पनि हुँदैन । यसले सहकारीलाई नोक्सानी गर्दैन बरू बैंक र लघुवित्तमा कारोवार गर्ने सदस्य पनि सहकारी तिरै आउँछन र सहकारीको दायरा अझ फराकिलो हुन्छ ।